I-United Airlines icwangcisa ishedyuli enkulu yasekhaya ukusukela nge-Matshi 2020
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-United Airlines icwangcisa ishedyuli enkulu yasekhaya ukusukela nge-Matshi 2020
Inqwelomoya yenqwelomoya iya kubhabha iinqwelomoya eziyi-3,500 zemihla ngemihla ngeyoMnga-ezona zininzi okoko kwaqala ubhubhane kunye ne-91% yeshedyuli yayo yasekhaya ka-Disemba-ukuxhasa ukunyuka okulindelweyo kwimfuno yokuhamba ngeholide.
Ishedyuli kaDisemba ibandakanya unxibelelwano olutsha phakathi kweMidwest kunye nezixeko ezinemozulu efudumeleyo njengeLas Vegas neOrlando.
Ishedyuli entsha ibandakanya phantse iinqwelomoya ze-70 zemihla ngemihla ukuya kwiindawo zokutyibilika, kubandakanya inkonzo entsha phakathi kwe-Orange County kunye ne-Aspen.
Ngokwe-United Airlines, ukukhangela iindiza ngeeholide kwiwebhusayithi yeZizwe eziManyeneyo kunye nenkqubo yeenqwelo moya yenyuka nge-16%, xa kuthelekiswa no-2019.
I-United Airlines ibhengeze ukuba iyakubhabha ngeshedyuli yayo enkulu ukusukela oko kwaqala ubhubhane ukuhlangabezana nolindelo lokuhamba ngeholide, kugxininiswa ekunxibelelaniseni iMidwest nezixeko ezinemozulu efudumeleyo njengeLas Vegas neOrlando kunye nokubonelela phantse yonke imihla ngama-70. Iinqwelomoya ukuya kwiindawo zokuskiya, kubandakanya inkonzo entsha phakathi kweOrange County kunye neAspen.
Ngoku ka United Airlines, uhambo lokuhamba ngenqwelomoya ngeholide kwiunited.com kunye nenkqubo yeenqwelo moya zonyuke nge-16%, xa kuthelekiswa no-2019. Ukuhamba kweeholide kulindeleke ukuba kube ngoLwesine, nge-24 kaDisemba nangeCawa, nge-28 kaJanuwari.
Inqwelomoya yenqwelomoya iceba ukubonelela ngaphezulu kwe-3,500 yeenqwelomoya zekhaya mihla le ngoDisemba, ezimele i-91% yamandla asekhaya xa kuthelekiswa ne-2019.
"Sibona imfuno ezininzi zokungena kwi-data yethu kwaye sibonelela ngeshedyuli kaDisemba egxile kwizinto ezimbini abantu abazifunayo kakhulu ngeeholide: ilanga elifudumeleyo kunye nekhephu elitsha," utshilo u-Ankit Gupta, usekela mongameli wocwangciso lwenethiwekhi nokucwangciswa kwe United Airlines. "Siyazi ukuba iintsapho kunye nabahlobo banomdla wokudibanisa eli xesha leholide, yiyo loo nto sonwabile ukongeza iinqwelomoya eziza kubanceda badibane kwaye babhiyoze kunye."
NgoDisemba, iUnited izakuqala iinqwelo moya ezintsha ngqo Las Vegas kunye nePhoenix esuka eCleveland, ukuya ku Orlando ukusuka e-Indianapolis. Umphathi uya kuphinda aqhubeke neenqwelomoya ezisibhozo ezithandwayo ezivela ezixekweni zaseMidwest, kubandakanya iindlela eziya eFort Lauderdale, eFort Myers, eOrlando naseTampa, ezibonelela ngezona ndawo zokuhamba ngenqwelomoya ukusuka eCleveland ukusukela ngo-2014 kubandakanya nenkonzo ethe ngqo eNassau naseCancun. I-United iya kunikela ngeenqwelo moya ze-195 zemihla ngemihla ukuya kwiindawo ezili-12 eFlorida kobu busika, ezona nqwelo moya zininzi zisiya kwiLanga leLanga kwimbali yenkampani. I-United iphinda iqale ngqo kwiinqwelomoya ukusuka eColumbus, e-Indianapolis, eMilwaukee nasePittsburgh ukuya eFort Myers- zezinye zeenqwelomoya ezaziwa kakhulu ngenqwelomoya ebusika ophelileyo.
Abathengi abakhetha umgubo omtsha banokonwabela ukubhabha ngenqwelomoya ngeendawo zokubaleka ukuskiya kunye neUnited kunayo nayiphi na enye into ephetheyo. I-airline inikezela ngeenqwelomoya zemihla ngemihla ezingama-66 ukuya ngaphezulu kweshumi elinambini lokuya e-US, kubandakanya nenkonzo entsha kraca eyaqala ngaloDisemba phakathi kwe-Orange County kunye ne-Aspen. Kweli xesha lasebusika, i-United izakuba neenqwelomoya ukuya e-Aspen / kwi-Snowmass, eMammoth, eBozeman / kwi-Sky enkulu, kwi-Eagle / Vail, eKalispell, eGunnison / kwiCrested Butte, eHayden / eStamboat Springs, eJackson Hole, eMontrose / eTelluride, eReno / Tahoe, eSun Valley Izikhululo zeenqwelo moya zayo.